SEKOLIN’NY ZANDARIMARIA : Mpiadina roa lahy maty teo am-panaovana adina ara-panatanjahantena
Mpiadina roa lahy nanatanteraka ny fifaninanana hidirana mpianatra ho Zandary teo anivon’ny Sekolin’ny Zandarimariam-pirenena ao Ambositra no namoy ny ainy, ny sabotsy lasa teo. 18 avril 2017
Nandritra ny fanatanterahana ny fanadinana ara-panatanjahantena izy roa lahy ireo tratran’ny tsy fahasalamana tampoka.
Rehefa nahavita ilay fitsapana hazakazaha mirefy 1 000 m izy ireo no avy hatrany dia safotra tsy nahatsiaro tena intsony, araka ny vaovao voaray. Nikoropaka avokoa ny teo anivon’ny sekoly nitondra azy ireo nankany any amin’ny hôpitaly kanefa na natao aza ny fialana nenina rehetra samy tsy tana ny ain’izy ireo roa lahy. Tsy vao sambany fa efa fanindroany izao no nisiana mpiadina maty teo am-panaovana ny fifaninanana hidirana mpianatra ho Zandary.
Tamin’ny taon-dasa dia tovolahy iray isan’ireo mpiadina ihany koa no nitambotsotra tampoka teo am-pilaharana. Nialana nenina noentina toeram-pitsaboana ihany koa izy tamin’izany saingy tsy tana ny ainy. Ity farany dia nambaran’ny fianakaviany fa efa nanana aretina nitaiza azy hatramin’izay ka izay no heverina no nitarika ny fahafatesany. Ny an’iretsy roa lahy eo ambony kosa, tsy mbola fantatra mazava izay antony nahatonga ny loza. Andrasana ny tatitra avy amin’ny fianakavian’izy ireo.